Announcement – Colors Rainbow
admin Announcement August 31, 2017 August 31, 20170Comment
လုပ်ငန်းခွင် မညီမျှမှုနှင့် LGBT များ ... See MoreSee Less
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ (၁၀) လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ပေးအပ်မယ့် ဝဿန် LGBT ရသစာပေပြိုင်ပွဲရဲ့ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်ကဏ္ဍ ဆုတံဆိပ်လေးတွေ.... :) ... See MoreSee Less
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ (၁၀) လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ပေးအပ်မယ့် ဝဿန် LGBT ရသစာပေ...
လားရှိုးမှ အမျိုးတို့အား အသိပေးဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်နော့် 🌈 ... See MoreSee Less
Walks of life lashio လူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာပြခန်းလေးစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 🌈🌈🌈🌈...
Colors Rainbow updated their cover photo. ... See MoreSee Less
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားနှင့် ဝဿန် LGBT ရသစာပေပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခြင်း
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနား (International Human Right Day) ကို Myanmar Culture Valley Shopping Center (ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် ပြည်သူ့ဥယျာဉ် ရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုဒ်အနီး) မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးငြိမ်းမေတ္တာအဖွဲ့၊ Kings n Queens အဖွဲ့နဲ့ Colors Rainbow အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်မယ့် ဒီလူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ HIV/AIDS အသိပညာပေး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး အသိပညာပေး ဖျော်ဖြေမှုများကိုလည်း တစ်ပေါင်းတည်း ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားနဲ့အတူ Colors Rainbow အဖွဲ့ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဝဿန် LGBT ရသစာပေပြိုင်ပွဲရဲ့ (ဝတ္ထုတို ဝတ္ထုရှည်) ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုလည်း ပူးတွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြုလုပ်မည့် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားနဲ့ ဝဿန် LGBT ရသစာပေပြိုင်ပွဲ (ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်) ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို မည်သူမဆို ကြွရောက် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ ... See MoreSee Less
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားနှင့် ဝဿန် LGBT ရသစာပေပြိုင်ပ�...